Sonos Oo Soo Bandhigay Qalab Bedelaya Baytariga Oo Loogu Talo Galay Sonos dhaqaaq | Waxaan ka socdaa mac
Sonos Waxay Soo Bandhigtay Qalab Bedelaya Baytariga Oo Loogu Talo Galay Sonos dhaqaaq
Dhowr saacadood ka hor, shirkadda Sonos, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu fiican marka loo eego kuwa ku hadla caqliga, ayaa lagu soo bandhigay macnaha guud ee CES 2021 waxa adeegsadayaal badani rabeen, a Qalabka beddelka baytariga ee ku hadla Sonos dhaqaaq weyn.
Qalabkani runtii waa sahlan yahay in la dhigo kuwa ku hadla isla markaana waxa lagu gaadho waa in si toos ah loo kordhiyo nolosha af-hayeenkeenna dhawr sano oo dheeri ah. Sonos Move waa midka ugu yar ee Sonos laga qaadi karo marka loo eego dadka ku hadla mana aha in aysan aheyn afhayeen la qaadan karo miisaankiisa iyo cabirkiisa awgood, laakiin waa run in maqnaanshaha fiilada ayaa ka dhigaysa tan ugu yar ee la qaadi karo dadka ku hadla.
Hadda imaatinka baytarigan dibedda ah waxaan kordhin karnaa nolosha waxtarka leh ee qalabka wax badan. Xirmada waxaa ku jira wax kasta oo aan u baahanahay inaan ku beddelno, nooc ka mid ah gitaarka u eg "soo qaad" si kor loogu qaado silikoonka salka ugu jira aaladda loo baahan yahay in laga saaro boolal ku dhaca daboolka afhayeenka. Dabcan, boolal dheeri ah ayaa sidoo kale lagu daray dib-u-ururin. Qalabkan cusub ee durbaanka loogu beddelayo Sonos Move waxaa lagu heli karaa midabbo la mid ah kan ku hadla laftiisa iyo Waxay leedahay qiimo dhan 79 euro.
Websaydhka Sonos waxay muujineysaa xirmada Move si ay u bedesho batteriga oo ay u dheereyso noloshiisa Raritaanka qalabkan durbaanka ah gabi ahaanba waa bilaash laga soo bilaabo websaydhkeeda iyo sidoo kale baytarigu wuxuu bixiyaa isla madax-bannaanida 36 Wh oo ah qiyaastii 11 saacadood oo lacag ah halkii batteriga asalka ah ay leedahay shirkadda Shaki la'aan iibsasho xiiso leh oo loogu talagalay kuwa iskiis u maamula Sonos Move mar dambe ma buuxinayaan filashooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Sonos Waxay Soo Bandhigtay Qalab Bedelaya Baytariga Oo Loogu Talo Galay Sonos dhaqaaq
Raadi My ayaa u furaya dhinacyada saddexaad kahor 'AirTags'